Umgomo Wamakhukhi - Mili wami
1. Isitolo asiqoqeki ngokuzenzakalelayo noma imiphi imininingwane, ngaphandle kolwazi oluqukethwe kumakhukhi.
2. Amakhukhi (abizwa ngokuthi "amakhukhi") ayidatha ye-IT, kumafayili wombhalo athile, agcinwa kudivayisi yokugcina yomsebenzisi wesitolo futhi enzelwe ukusebenzisa amawebhusayithi weSitolo. Amakhukhi ngokuvamile aqukethe igama lewebhusayithi aqhamuka kulo, isikhathi sokugcina sayo kudivayisi yokugcina nenombolo eyingqayizivele.
3. Ibhizinisi elibeka amakhukhi kudivayisi yokugcina yoMsebenzisi weSitolo nokuyithola yi-opharetha Isitolo.
4. Amakhukhi asetshenziselwa: o ukuguqula okuqukethwe kumawebhusayithi weSitolo okuthandwa ngumsebenzisi futhi enze kangcono ukusetshenziswa kwamawebhusayithi. Ikakhulu, lawa mafayili avumela ukuqaphela insiza Yomsebenzisi Wesitolo futhi akhombise kahle iwebhusayithi, ehambisana nezidingo zakhe; o ukudala izibalo ezisiza ukuqonda ukuthi Abasebenzisi bakwaSitolo bawasebenzisa kanjani amawebhusayithi, okuvumela ukuthuthukisa ukwakheka kwabo nokuqukethwe;
5. Isitolo sisebenzisa izinhlobo ezimbili eziyisisekelo zamakhukhi: amakhukhi "weseshini" namakhukhi "aphikelelayo". Amakhukhi weSeshini angamafayili wesikhashana agcinwe kudivayisi yokugcina yoMsebenzisi aze ashiye iwebhusayithi noma acishe isoftware (isiphequluli sewebhu). Amakhukhi aqhubekayo agcinwa kudivayisi yokugcina Yomsebenzisi yesikhathi esichaziwe kumapharamitha amakhukhi noma aze asuswe uMsebenzisi.
6. Isitolo sisebenzisa izinhlobo ezilandelayo zamakhukhi: amakhukhi "adingekayo", anika amandla ukusetshenziswa kwensizakalo etholakala esitolo, isb. Amakhukhi wokuqinisekisa asetshenziselwa izinsizakalo ezidinga ubuqiniso eSitolo; amakhukhi asetshenziselwa ukuqinisekisa ukuphepha, isibonelo asetshenziselwa ukuthola inkohliso emkhakheni wobuqiniso ngaphakathi kweSitolo; Amakhukhi "Performance", anika amandla ukuqoqwa kwemininingwane yokuthi angawasebenzisa kanjani amawebhusayithi eSitolo; Amakhukhi "okusebenzayo", anika amandla "ukukhumbula" amasethingi akhethwe ngumsebenzisi futhi enze kube ngokwezifiso isikhombimsebenzisi somsebenzisi, isb ngokuya ngolimi olukhethiwe noma isifunda soMsebenzisi, usayizi wefonti, ukubukeka kwewebhusayithi, njll; Amakhukhi "Okukhangisa", anika amandla abasebenzisi ukuthi banikeze okuqukethwe kokukhangisa okwenzelwe kakhulu izintshisekelo zabo.
7. Ezimweni eziningi, isoftware esetshenziselwa ukuphequlula amawebhusayithi (isiphequluli sewebhu) ngokuzenzakalela ivumela ukugcinwa kwamakhukhi kudivayisi yokugcina yomsebenzisi. Abasebenzisi bezitolo bangashintsha izilungiselelo zabo zamakhukhi nganoma yisiphi isikhathi. Lezi zilungiselelo zingaguqulwa ikakhulukazi ngendlela yokuthi zivimbe ukuphathwa okuzenzakalelayo kwamakhukhi kuzilungiselelo zesiphequluli sewebhu noma ukwazisa ngazo ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa kudivayisi yomsebenzisi wesitolo. Imininingwane enemininingwane ngamathuba nezindlela zokuphatha amakhukhi iyatholakala kuzilungiselelo zesoftware (web browser).
8. Isisebenzisi seSitolo sazisa ukuthi imikhawulo yokusetshenziswa kwamakhukhi ingathinta ezinye izinto ezitholakala kumawebhusayithi eSitolo.
9. Amakhukhi abekwe kudivayisi yokugcina yoMsebenzisi weSitolo nawo angasetshenziswa ngabakhangisi nabalingani ababambisanayo nabasebenza ku-Isitolo.
10. Imininingwane eminingi yamakhekhe iyatholakala ku- www.wszystkoociasteczkach.pl noma engxenyeni ethi "Usizo" yemenyu yesiphequluli sewebhu.